ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: နေစရာ
ဘ၀မှာ မိန်းမနှစ်ယောက် တိတိကျကျသစ္စာဖေါက်ခံရဘူးတဲ့.
သူ မစီးရက်လို့သူ့ ရဲဘော်တွေကို ချွတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖိနပ်နဲ့ ပါးရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့
သူ့ တရားအတွက် သူပစ်ဖေါက်ဖို့ယုယထားတဲ့သေနတ်နဲ့ သူပြန်အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့
မျက်ရည်သုတ်မဲ့ ရင်ခွင်လေးကို မျှော်လင့်မိဦးမယ်.
(နိုဝင်ဘာ ၂၅ ။၂၀၀၅ ခုနှစ် နံနက် ၁၀း၂၆ နာရီ)
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 8:02 AM
ဆောင်းယွန်းလ, November 25, 2009 at 12:48 PM
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျေးဇူးတော်တင်စရာရှိတာတွေကို အခမ်းအနားမဲ့စွာနဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေထပ်တင်နေကြရရင်းပေါ့ ကိုတင်နိုင်ထွန်းရေ
Nge Naing, November 25, 2009 at 5:50 PM
ကဗျာလာဖတ်သွားပါတယ်။ သိပ်တော့ နားမလည်ဘူး။ C-Box မရှိလို့ ဒီမှာပှဲုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော့်။ ကိုဆောင်းယွန်းလ ပြောတဲ့ ကိုတင်နိုင်ထွန်း ဆိုတာက ကိုချစ်ဖေကို ပြောတာလား။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း, November 25, 2009 at 6:41 PM
ကိုချစ်ဖေ, November 25, 2009 at 8:40 PM
ကျနော့် ကဗျာက ကျနော်ခံစားမိသလိုရေးထားတာမို့
ခံစားရသလို ခံစားနိုင်ပါတယ်မငယ်နိူင်.မခံစားရတာလဲရှိမှာပါ ကျနော့်မေးလ်က
ကျနော့်ကို အင်ဗိုက်လုပ်ရင် ၀မ်းသာပါတယ်.
ကိုချစ်ဖေ, November 25, 2009 at 8:42 PM
ကိုကျောက် ကျနော်မဟုတ်ဘူး နှစ်ယောက်က
Ko Oo, November 26, 2009 at 11:07 PM
ရောက်ပါကြောင်း။ မဖတ်ရ မနေနိုင်လို့ ဖတ်သွား မှတ်သွားပါကြောင်းပါ ရဲဘော်ကြီးရေ ...